Fifampitifirana mahery vaika :: Miaramila sy zandary voatafika teo am-pisakafoanana • AoRaha
Fifampitifirana mahery vaika Miaramila sy zandary voatafika teo am-pisakafoanana
Henjana ny fifampitifirana teo amin’ny dahalo manodidina ny efapolo mirongo basy mahery vaika sy ny tafika ary zandary am-polony maro ihany koa, tany Kiranobe-Belobaka, afak’omaly antoandro. Marobe ireo dahalo namoy ny ainy sy naratra saingy nalain’ireo namany, araka ny nampitain’ny loharanom-baovao. Teo am-pisakafoanana, mialoha ny hetsika fanenjehana an’ireo olon-dratsy no niharan’ny fanafihana tampoka iretsy mpitandro filaminana.
Voalaza fa avy nanafika tany Beombalahy-Mandoto ireo dahalo, tamin’ny alahady lasa teo. Teo am-panarahan-dia azy ireo iretsy miaramila sy zandary no lasibatry ny tifitra. Nandefasana ekipa fanampiny avy any Tsiroanomandidy haingana iretsy farany.
Ora taorian’ny nahatongavan’ireo mpitandro filaminana, izay naka vatsy sy sakafo, tao Kiranobe, no nigadonan’ireo dahalo marobe. Naharitra adiny telo teo ho eo ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Soa fa nieren-doza avokoa ireo olon’ny Tafika raha nahafatesana maromaro sy naratra ny tamin’ireo andian-dahalo. Mitohy ny fikarohana azy ireo.
Jiolahy raindahiny :: Notsatohany lefona ny vadiny bevohoka
Hosoka :: Tra-tehaka ilay vehivavy mpivarotra diplaoma sandoka